Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny minisitry ny fizahan-tany ao Grenada dia nanamarika ny fisokafan'ny volana fampahafantarana ny fizahantany 2020
Ny minisitry ny fizahan-tany, fiaramanidina sivily, fiaretana amin'ny toetrandro ary ny tontolo iainana, Grenada, Hon. Solombavambahoaka Dr. Clarice Modeste-Curwen
Grenadyny minisitry ny fizahan-tany, fiaramanidina sivily, fiaretana amin'ny toetrandro ary ny tontolo iainana, Hon. Dr. Clarice Modeste-Curwen MP dia namoaka izao hafatra izao tamin'ny volana fampahafantarana momba ny fizahantany 2020:
Ry Grenadianina namana, mahafaly ahy ny miresaka aminareo amin'ny fisokafan'ny volana fanentanana momba ny fizahan-tany 2020. Lohahevitra amin'ity taona ity, 'fizahan-tany; Mampifandray Antsika Rehetra ”dia manasongadina fatratra ny fomba nanohinana ny fiainantsika rehetra tamin'ny fatra sasany nataon'ny indostrian'ny fizahantany ary ny valim-panafody COVID-19 no nanazava kokoa izany.
Rehefa mieritreritra ny indostrian'ny fizahantany isika dia mieritreritra asa fivelomana sy famoronana asa aloha. Ny statistika dia mampiseho fa olona 10,400 2 eo ho eo no nahazo tombony mivantana sy ankolaka tamin'ny indostria talohan'ny COVID. Ity fahatongavana ity dia manan-danja kokoa kokoa rehefa misy mihevitra ny fianakaviana miankina amin'ny mpiasan'ny fizahantany amin'ny fivelomany iraisan'ny rehetra. Misy ny mety ho an'ny mpiasa fizahan-tany iray monja mba hisy fiantraikany amin'ny fiadanam-piainana 3-XNUMX fiainana hafa. Nandritra ny areti-mandringana, ny indostrian'ny fizahantany dia voa mafy ary tsapan'ny fianakaviana maro izany, noho izany, fantatry ny governemanta fa tokony hihetsika haingana izy io mba hahazoana antoka fa voavonjy ilay indostria.
Lafiny iray hafa manasongadina ny fomba 'Mampifandray antsika rehetra ny fizahantany' no fidiram-bola mivantana sy ankolaka vokarin'ny indostria, izay manome ny ampahefatry ny vokatra an-trano an-trano. Ny data hatramin'ny volana septambra 2020 dia mampiseho fa i Grenada dia niaina fihenan'ny 42.7% amin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika amin'ny ankapobeny izay nahatonga ny fihenan'ny fandaniana ho an'ny fahatongavan'ny olona 75% fotsiny na 300 tapitrisa dolara fotsiny. Ity no vola miditra ilaina hanohanana ny fivoaran'ny Grenada amin'ny alàlan'ny fanabeazana, fitaterana, fahasalamana ary serivisy miankina amin'ny firenena.
Fahatelo, ny fizahantany dia manana fifandraisana lalina amin'ireo sehatra manakiana hafa toy ny Fambolena, angovo, jono, fialamboly ary asa tanana. Ny synergy misy eo amin'ny Fambolena sy ny fizahan-tany dia midika fa ny tantsaha eo an-toerana dia afaka mampitombo ny famokarana vokatra vaovao hamatsy ny sehatry ny Sakafo sy ny zava-pisotro ary ny fampiantranoana. Tao anatin'ny areti-mandringana, tantsaha, mpanjono ary mpivarotra sasany no nitatitra fa nisy fatiantoka lehibe rehefa nakatona ny trano fandraisam-bahiny. Amin'ny ho avy, tiako ny hahita ny fifamatorana eo amin'ireo sehatra roa ireo rehefa mikatsaka ny hanome sakafo ara-pahasalamana sy vaovao ho an'ireo mponina sy mpitsidika anay izahay.
Ary farany, mampifandray antsika rehetra ny fizahan-tany satria mpiavonavona ao Grenada, Carriacou ary Petite Martinique izahay. Ny fizahan-tany dia ianao, ny fizahan-tany no ahy; antsika rehetra izany. Raha tsy manavao sy tsy afaka manome traikefa tsy hay hadinoina isika, raha tsy miraharaha ny tontolo iainantsika ho an'ny taranaka ho avy, raha tsy mitandrina ny kolontsaintsika isika, raha tsy olona sariaka sy mahalala fomba isika, raha tsy mamokatra sakafo vaovao mahasalama. , avy eo ny indostrian'ny fizahan-tany, ny tombony azontsika dia tsy maharitra. Na inona na inona ataonao amin'ny fiainana dia manana andraikitra hilalao ianao.
Androany, faly izahay mahita ny mariky ny fanarenana miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny misokatra indray ary ny sidina lehibe miverina avy any Etazonia, Kanada, UK ary ny faritra ary noho izany dia tokony ho feno fankasitrahana isika. Mandeha miadana fa azo antoka fa miverina mitsangana isika, saingy hitaky ezaka mitohy ny fiaraha-miasa mba hahazoana antoka fa hiverina matanjaka kokoa isika. Mampifandray antsika rehetra any Grenada, Carriacou ary Petite Martinique ny fizahantany.